लक डाउनमा कस्तो कुराको बहस भैरहेको छ ? (भिडियो) « Mazzako Online
लक डाउनमा कस्तो कुराको बहस भैरहेको छ ? (भिडियो)
नेपाली फिल्म क्षेत्रले आखिर यो लक डाउनमा कस्तो कुराको बहस गर्यो होला । हामी कुन बहसमा रमाएका छौ र गर्नुपर्ने बहस के हो ? लक डाउन खुकुलो हुदै गएपनि नेपाली फिल्म चलायमान हुने अवस्था कहिलेबाट सुरु हुन्छ, पक्का छैन । किनकी, सरकारले सिनेमा क्षेत्रलाई सबैभन्दा अन्तिममा खुल्ने गरी विकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपाली सिनेमाले भोलीका दिनमा भयाभह अवस्था भोग्ने अवस्था आइरहँदा अहिले बहस भने अर्केतिर हुँदैछ । भारतमा परिवारवादको बहस सुरु भएसँगै यतिबेला नेपालमा पनि परिवारवादको बहस भैरहेको छ । तर, नेपालमा परिवारवादको बहसका कलाकर्मीहरु नै एक छैनन् । किनकी, दुई चार जना कलाकारको अनुहार हेरेर सिनेमा क्षेत्रमा परिवारवाद छ भन्नु गलत हो ।
निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरीले नेपालमा परिवारवाद नरहेको बताए । बरु, उनले नेप्टोज्म र चेप्टोज्म रहेको बताए । यसको अर्थ सिनेमा क्षेत्रले परिवारवादको बहस गर्ने बेला भएको छैन ।
सिनेमा क्षेत्रका सफल निर्माता तथा हल संचालक प्रदिपकुमार उदयका अनुसार सिनेमा क्षेत्रमा परिवारवाद र समुहवाद छ भनेर भन्नुको तुक छैन । किनकी, सिनेमा क्षेत्रमा अहिले यो बिषयमा बहस गर्ने समय नै होइन । अहिले कोरोना भाइरसपछि कसरी सिनेमा क्षेत्रलाई उभो लगाउने भनेर बहस गर्ने बेला हो ।
हुनत, भारतमा केही कुराको बहस सुरु भयो भने यो नेपालमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने केही मानिसहरुको सोच छ । यहीकारणले पनि भारत र नेपालका थुप्रै परिस्थिती नमिल्दा पनि यस्ता कुराहरु बहसमा आउँछन् । तर, यी कुराहरु बहसमा ल्याउनुको अर्थ के होला ?
के साच्चिकै अहिले परिवारवादको बहस गरेर बस्ने बेला हो या सिनेमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सबै एक जुट हुनुपर्ने अवस्था हो । बहस यता गरौ न हुन्न ।